China ngwaahia Aluminium Bar efere fin Intercooler Manufacturer na Supplier | Enweghi m
Ahaziri Aluminium Bar efere fin Intercooler
Nkọwapụta Ngwaahịa: Onye na-ekpuchi mmiri ikuku, nke a makwaara dị ka onye na-ekpo ọkụ ikuku, bụ onye na-agbanwe ọkụ na-ebufe ụgwọ ụgwọ na mmiri dị n'etiti (nke na-abụkarị mmiri) na-eme ka ikuku gbasaa ikuku. Usoro ndị a na-eji ebe a na-ekpo ọkụ na ebe ndị ọzọ, ọ na-abụkarị n'ihi mgbochi ohere iji kpochapụ okpomọkụ a na-achọghị, dị ka sistemụ igwe ikuku igwe. Air-to-liquid intercoolers bụ Elezie arọ karịa ikuku na-ikuku oyi n'ihi na mmezi mejupụtara mejupụtara. Sistemụ ...
Onye na-ekpuchi mmiri ikuku, nke a makwaara dị ka ihe na-eme ka ikuku na-akwụ ụgwọ, bụ onye na-agbanwe ọkụ na-ebufe ụgwọ ụgwọ na mmiri dị n'etiti (na-abụkarị mmiri) nke na-eme ka ikuku gbasaa ikuku. Usoro ndị a na-eji ebe a na-ekpo ọkụ na ebe ndị ọzọ, ọ na-abụkarị n'ihi mgbochi ohere iji kpochapụ okpomọkụ a na-achọghị, dị ka sistemụ igwe ikuku igwe. Air-to-liquid intercoolers bụ Elezie arọ karịa ikuku na-ikuku oyi n'ihi na mmezi mejupụtara mejupụtara. Sistem (mgbapụta mgbasa mmiri, radiator, mmiri na piping). Toyota Celica GT-Four nwere sistemu a site na 1988 rue 1989 na site na 1994 rue 1999. O sonyekwara na Carlos Sainz Rally Championship site na 1990 rue 1993. Ihe omuma nke 1989-1993 Subaru nwere ihe odide 2.0-DOHC flat-4 njin. E tinyere igwe ndị na-ekpo mmiri ikuku n’elu ụdị GT na RS e rere na Japan, Europe na Australia.
Otu uru dị mkpa nke ikuku ikuku na mmiri bụ ogologo ngụkọta nke ọkpọkọ na intercooler, nke na-enye nzaghachi ngwa ngwa (obere turbo lag), na-enye ọnụ ọnụ ọsọ ọsọ karịa ọtụtụ ntọala precooler Supercharged. Facilitiesfọdụ ụlọ ọrụ nwere olulu mmiri nke nwere ike ijide ice ma mepụta ọnọdụ okpomọkụ dị ala karịa ikuku ikuku, nke bụ nnukwu uru (n'ezie, ọ dị mkpa ka edochi ice mgbe niile).
Ford nakweere teknụzụ mgbe ha kpebiri iji ntinye mmanye (site na Supercharger) na Mustang Cobra na Ford Lightning truck. Ọ na-eji mmiri / glycol ngwakọta intercooler n'ime oriri manifold, dị n'okpuru supercharger, na nwere ogologo okpomọkụ Exchanger n'ihu ndokwasa, niile kwadoro site na Bosch mgbapụta mere maka Ford. Ford ka na-eji teknụzụ a eme ihe taa na Shelby GT500 ha. 2005-2007 Chevrolet Cobalt SS Supercharged na-ejikwa usoro yiri nke ahụ.
Air liquid intercoolers bụ ihe kasị nkịtị ụdị intercooler hụrụ na mmiri maqbx chekwebe ruo ugbu a, dị ka a na-akparaghị ókè ọkọnọ nke jụrụ mmiri dị, na ọtụtụ engines na-emi odude ke nchọ compartments, na-enye ezi jụrụ ikuku maka ikuku. Okporo ụzọ - Ọ nwere ike isi ike ị nweta ike ikuku. Intercooler nke mmiri na-ewere ụdị nke onye na-agbanwe ọkụ tubular nke ikuku na-ekesa gburugburu ọkpọkọ na ngalaba na-ebugharị site na usoro nke ọkpọkọ na mmiri jụrụ oyi. Mmiri mmiri maka intercooler na-adabere kpọmkwem usoro jụrụ usoro arụnyere na engine. Imirikiti injin mmiri na-ekesa mmiri dị n'ime ha site na onye na-ekpo ọkụ nke mmiri mmiri na-eme. N'ime usoro dị otu a, a ga - ejikọ onye na - ekpuchi mmiri na eriri mmiri ma debe ya n'ihu igwe na - ere ọkụ iji hụ na mmiri oyi na - eweta.
Nodị No: TEC-OIL-010
Nke gara aga: Oyi-Oil oyi-Industrial Aluminium efere Ma Ogwe Hydraulic Oil oyi maka Excavator na ndị ọzọ na-ewu Machinery pistin Compressor